Walaaca Ethiopia, Wareerka Soomaaliya, Wis-Wiska Jabuuti, Waalida Waddani iyo walbahaaraka Bulshada Somailand. |
Walaaca Ethiopia, Wareerka Soomaaliya, Wis-Wiska Jabuuti, Waalida Waddani iyo walbahaaraka Bulshada Somailand.
Tan iyo horaantii sannadkii 2015, markii Jabhada Shiicada xukunkii ka caydhisey Madaxaweynihii Yemen Mansour Hadi iyo bilowgii xulufada Sacuudigu hor kacaya ay soo faragelisey qalalaasaha ka aloosan Yemen, waxa isa soo tarayey isbedel stratejiyadeed oo mandaqada Geeska Afrika iyo waddamada ku xeeran Bada Cas iyo Gacanka Cadmeed aad looga dareemey.
Isbedelka Stratejiyadeed ee ka dhashey dagaalka qarsoon ee u dhexeeyey Sacuudi Carabiya iyo Iraan ayaa indhaha caalamka ku soo jeediyey Somaliland iyo Eritreya oo muddo rubuc qarni ah dibomaasiyiinta Caalamku indhaha ka dul lalin jireen. Waddanka Eritreya ayaa durba faa’iidooyin dhaqaale iyo siyaasadeed oo baaxad leh ka dhaxley ciidamada Sacuudi Carabiya iyo Emaraatka ee xeebtiisa soo degey, tiiyo dagaalka Yemen ka holcayaana nabadgelyadiisa aanu wax saameyn ah ku yeelan.
Somaliland, oo muddo ka badan 25 sanno aheyd waddanka keli ah Geeska Afrika ee ku dhaqma dimuqraadiyada reer Galbeedku ku faanaan ayaa ku guuleysatey in ay Maalgashi baxaad leh iyo qadarin siyaasadeed ka hesho Dalka Isu -Taga EmaaraatkaCarabta oo ka mid ah waddamada Khaliijka kuwa ugu dhaqaalaha roon. Mashaariicdan Imaaraadka ee Berberi waa fursadii muddada dheer aynu baadigoob keeda ku jirney. Tan iyo gooni isu-taageenii, Xukuumadihii dalka hogaamiyey waxay raadinayeen sidii ay Dunida dereenkeeda u soo jiidan lahaayeen si loo helo maalgashi dhaqaalaheena kor u qaada, saboolnimadana inaga saara. Mashaariicdani waxey kordhinayaa fursadda ay dhallinyaradeenu shaqo ku heli karto, ganacsatadeenu dhaqdhaqaaq ku heli karto, dalkeenuna saaxiibo caalami ah ku heli karo.
Dhanka kale, Somaliland waxey muddo rubuc qarni ah dedaal dheer ugu jirta sidii ay Beesha Caalamka xubin buuxda uga mid noqon laheyd, walow ay tahey wadan ay Dawladnimadu u dhameystiran tahey. Maalgashiga Emaaraatka iyo indhaha BeeshaCaalamka ee maanta dalka usoo jeestey waxey fure muhiim ah u yihiin dhameystirkii Dawladnimo ee Somaliland. Aqoonsiga siyaaasadeed waxa keena Dan, maantana waddamada Deriska qaarkood waxey dantoodu noqotey in ay Somaliland xhidhiidh dhaqaale la yeeshan. Xidhiidhka dhaqaale, marka uu taaba galo waa xadhig dublomaasiyadeed oo aynu cuskanayno, wuxuu horseedayaa xidhiidh Siyaasadeed iyo lexejeclo uu waddanka ku maalgashadey kaa yeesho, aakhirkana waxa la isweydaarsadaa Safaarado.
Faa’iidooyinka Dhaqaale iyo siyaasadeed ee Somaliland ka dhaxli doonto Salidhiga Emaaraatka iyo maalgashida DPW waxa daliil u ah qaylada kasoo yeedheysa Jabuuti iyo Soomaaliya oo cadow ku ah nabadgelyada iyo horumarka Somaliland. Cadowga Somaliland in ay waxa inoo kordha ka cabaadaan waa arrin aan la yaab laheyn, oo marka horeba wanaag kama aynu fileeyn, laakin waxa maanta wax lala yaabo ah in Bulshada Somaliland qarkood iyo rag siyaasiyiin isku sheegey oo u hanqal taagaaya in ay Hogaanka Dalka hantiyaan ay Maalagashiga Emaaraatka ee Xukuumada Madaxweyne Silaanyo dedaalka badan ku keentey ka soo horjeestaan si macna dara ah oo waliba ay la saftaan, isu fikirna noqdaan cadowga ummada ay doonayaan in ay maalin u taliyaan. Siyaasiyiinta mucaaridka ku ah Saldhiga Emaaraatka iyo Shirkada DWP waxa kalo ay dalil ka dhigtaan walaaca Ethiopia ka qabto ciidamo carbeed oo Somaliland soo dega, waxaana la mooda in ay noqdeen muwaadiin ethiopiyaan ah. Walaaca Ethiopia ee siyaasiyiinta Somaliland sheegayaan waa waxba kama jiraan maadaama uu Wafdigii dhawaan Muuse Bixi Cabdii, Guddoomiyaha Kulmiye hogaaminaayey ee 10-02-2017 tegey Ethiopia hordhigey Ra’isul Wasaara Ethiopia, Hailemariam Desalegn qodob ku jira heshiiska Saldhiga Emaaraatka oo si cad u qeexaya in Dawlada Emaaraatka aaney sinaba Somaliland u keeni karin Ciidan aan aheyn keeda, sida u qorey wargeyska caanka ee Africaintalligence, cadakiisii 24-02-2017. Mucaaridku marka ay leeyihiin Xuutiyiintu waxay gantaallo ku soo gani doonaan Hargeysa iyo Berbera, Warkoodaas waa cabsi-gelin iyo buunbuunin. Haddii ay Xuutiyiintu awooddaa leeyihiin waxay duqayn lahaayeen Maka iyo magaalooyinka Sucuudiga ee u dhaw Yementa. Guddoomiyaha Xisbiga Waddani marka uu Muddaharaadkii London taageerey waxa hubaal ah in uu cadowga Somaliland farxad geliyey. Waa arrin nasiib daro ah, waxaaney inoo iftiimisey in Cabdiraxmaan Ciro aan lagu aamini karin masiirka Ummadeena.
Wargeyska Africaintelligence ayaa sidoo kale qorey in Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo dhawaan booqasho ku tagay Boqortooyada Sacuudiga, Madaxda dalkaasi u gudbiyay dacwad ka dhan ah Dowlada Emaaraatka Carabta, isagoo ku andacoonaaya in Emaaraatka Carabta la wareegayo dhul qaranka Soomaaliya leeyahay. Dacwaadaas soo shaac baxdey waxey sidoo kale u quus goysay Xisbiga Waddani ee ku doodaayey in Heshiiska Saldhiga ay Madaxda Soomaaliya sexeexen.
Dhanka kale wis-wiska Xukuumada jabuuti ka qaadey xidhiidhka isasoo taraya ee Emaaraatka iyo Somaliland ayuu Wargeysku sheegey in uu salka ku hayo dacwadii DPW iyo Jabuuti oo Maxkamada London Court of International Arbitration xukun aan racfaan laheyn ku ridey 21-02-2017 Dawlada Jabuuti, xukunkaas oo ah in Jabuuti si deg-deg ah magdhow dhan 350 milyan Doolar u siiso Shirkada DPW ee ay sharafteedi meel kaga dhacdey. Jabuuti ayaa aad uga cabsi qabta in go’aanka Maxkamadu horseed u noqdo shirkada badan oo Jabuuti ka aamin baxa, una guuraan dhankaa iyo Berbera oo la filayo in mustaqbalka dhow ay noqoto Marsada ugu muhiimsan Afrikada Bari, isuna xidha suuqyada Yurubta Galbeed iyo Koofurta Aasiya oo ah labada suuq ee Dunida maanta ugu dhaqaalaha Badan.
Si kastaba ha ahaate, Dagaalka Xulufada Sacuudigu hor kacaya ka wado Dalka aynu deriska nahey ee Yemen wuxuu u muuqdaa mid aad u daba dheeraanaya, waxaanu saameyn mugleh ku yeelan doona amaanka dhamaan waddamada Bada Cas iyo Gacanka Cadmeed ku xeeren. Somaliland oo waddamadaas ka mid ah waxey maanta iyo berriba u baahantahey Hogaamiye Aragti fog, hal-abuur dhaqaale iyo ku dhiiranaan arrimaha qaarkood leh, mar ahaantaana Daruuraha coladeed ee dul hoganayaa Bada Cas iyo Gacanka cadmeed inaga samatabixiya. Mucaaridka Somaliland ee maanta Horumarka dalka diidan, lana soo safanayaa Cadowga ummadeena uma muuqdaan kuwa u qalma in masiirka bulshada Somaliland lagu aamino karo.